inguqulelo 0.9.7.0 – Lebug kunye neempawu ngeenxa zonke, kwaye SuperProxy alpha
Isilimela 6, 2015 ngokuthi umnikelo 2 izimvo
bookmark entsha apha!
Nceda nyusela! Ndiyacela, Nceda nyusela! Ukukholisa kunye neswekile phezu.
Yini na ukuba umele uphucule?
Le nguqulelo ilungisa ukuqala Google inkxaso proxy, leyo ethetha ukuba Google Translation automated iya kusebenza kwakhona.
Le nguqulelo ihlaziya ifomati sedata, leyo ethetha Wordpress 4.2 ixhaswa, kwaye kulindeleke ukuba asindise ~ 40% sobungakanani table
Sade unohlobo lokuqala umhleli somva translation, uya kukubonisa nakuluhlu abantu bokwenene ziye zaguqulelwa ze uvumele wena kwakhona ngokukhawuleza kwaye ucime.
Njani umele uphucule?
Abanye intlahla, unalo ukhetho uphuculo ngokulula kwi ideshbhodi yakho Wordpress. Kucetyiswa ukuba backup, ngokuba akukho ndlela umva emva uphuculo database iye yagqitywa.
nayiphi na engathandekiyo, nemiba, iingxaki – le uqhagamshelane nathi ukwakha umhlobo wakho.
Yintoni na loo SuperProxy yaye kutheni umele wenza?
SuperProxy wethu omtsha “Fumana ubutyebi ngokukhawuleza” Udweliso. hi…
enyanisweni, sisebenzisa iindawo ekupheleni ukuvumela iinkampani nabantu ukuba ukufikelela wababela web. Siza uyakuhlawula lo zendlela, ngoko ukuba uthenge inkonzo ukubamba unayo iitoni data ukutshintshela awusebenzisi, siya ngokwenene ukuqonda ukuba wenze lo msebenzi, ukuba iza kusixhasa njani yaye mhlawumbi kuba kuhle xa yakho. Siya kupapasha iinkcukacha ezingaphezulu malunga noku njengoko zifumaneka.
kwaye – ukuze abaseleyo ChangeLog:
Woo uhlanganiso lebug
Isigingqi le base64 encoding nokunciphisa ubungakanani amaphepha iqela lo
Widget fixes yenza iindwe ubonise ngokuchanekileyo xa kusetyenziswa engalunganga kwibhokisi isiphathi
Ukususwa sesiphelo kudweliso inkqubela bar, nto ayifane ibonakale okanye esetyenziswayo luqhushululu ngaphezu kufanelekile
3 ngeelwimi ezintsha zixhaswa bing
locale shortcode xh
ukuphepha inguqulelo non text / umxholo JSON ayizinzise imiba nabanye plugins umxokozelo mela
Xhasa lesiphumo isigcini, enkosi Mark Serellis
Ezinye inkxaso kulawulo ishishini Java
Ngoko ke – Konwabele olu guqulelo, kwaye musa kuba ngumphambukeli, usazise ukuba isebenza njani wena.
ifayilishwe Phantsi: izaziso Release, uhlaziyo lwesoftwe ephawulweyo Nge: uphando loshintsho magama, engephi, khulula
inguqulelo 0.9.3 – Phi seflegi bam?
UCanzibe 10, 2013 ngokuthi umnikelo 40 izimvo
Abazange niye kude kakhulu, nceda ubukele le vidiyo okanye ufunde imiyalelo ngezantsi.
Yintoni ofanele uyenze ukuba ubabuyisele?
Nje ukunyusela uguqulelo ngokupheleleyo usebenzisa le miyalelo ilandelayo:
Ukunyusela uguqulelo akutshanje wordpress.org (leyo eya kuba ngabokugqibela, Pha)
Khangela “ukuvumela yokuphucula bookmark us” yezicwangciso
Khangela uphuculo kwaye enze uphuculo, kuko konke!
Yintoni entsha Versi 0.9.3:
Gqiba iya kusebenza ukususela site yethu
Ezinye bug fixes
Ukubanako ukususa irel = eyenye yayingasoloko luncedo
(0.9.3.1) Siye sakhulula bookmark sub kudityaniswe iilwimi ezintsha inkxaso Google, Gqala yethu iyonke – 73! (Ukuba umntu apha uthetha Hmong, nceda uqhagamshelane nathi)
Siyathemba ukuba nakuwuvuyela olu guqulelo.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: bookmark us, engephi, khulula, yokuzonwabisa, wordpress.org
inguqulelo 0.9.2 – 4 iminyaka ningazaphuli thina
EyoKwindla 11, 2013 ngokuthi umnikelo 3 izimvo
Sikhule 4 (enyanisweni 5) iitulip for iminyaka yethu
Ewe, kwakunjalo kwiminyaka emine ukususela inguqulelo yokuqala Transposh ngenxa Wordpress wakhululwa. kwaye ngenene, siye kufika indlela ende kakhulu.
Transposh Lisetyenziswa amawaka zonke iisayithi phezu web, kwaye kufuneka abasebenzisi bonwabe (kunye ibimnandi ngaphantsi ezimbalwa 🙂 ).
le nguqulelo, 0.9.2, na ngokwenene into kulindeleke ukuba ngoku, emva kweminyaka emine siya wawulindele ukuba uhlobo omnye (mhlawumbi nokuba zimbini) uya sele bekhululwe. kodwa kuyabonakala ukuba, ubomi ukuqhubeka abafane njengoko uceba ukuba.
Iwonga le izithuba okunene libhekisela ukuziphatha entsha yokwahlulahlula yethu, xa sasidla sidibana &nbsp; (kufuneka ibe isithuba non-ekuqhekezeni) thina sophuka ibinzana amabini, leyo kunoko wahluke bekumele ukuba izinto. Ngoko ke ngethemba lento ngoku esisigxina, kwaye siza kuphinda kuyaphula!
Okunye nguqu zibandakanya:
inkxaso ezisisiseko Woocommerce uhlanganiso
Qhuba ngaphezulu ityala xa omnye iplagi okanye imixholo kubangela process_page ukuba kubizwa kwexesha
Ukulungisa ibug zaziligezela xa inguqulelo efanayo eyabonakala kumhlathi ngaphezu kwakanye
Bing wongeze iilwimi ezimbini
Ukulungisa ibug ingxelo yi dserber ukhetho disallowing ulwimi kwisithuba apho translate_on_publish wayengumlwelwe
Update yeefayili .po, Turkish Translation ngokuthi Omar Faruk Khan
Uzakuyonwabela olu guqulelo! Lo ngumyalelo! 🙂
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele, izaziso Release, uhlaziyo lwesoftwe ephawulweyo Nge: bing (MSN) umguquli, usuku lokuzalwa, engephi, yokwahlulahlula, khulula
inguqulelo 0.9.1 – Ukuphucula njalo
EyoMqungu 23, 2013 ngokuthi umnikelo 4 izimvo
Translation Zisa Abantu Ndawonye
Ukuba sele ithunyelwe ngaphambili malunga 0.9.1 nto leyo uguqulelo kunokuba nice inkqubela entle. Kodwa yiba le oopopayi nice kakhulu, wenza ku Fiverr yi nokuveza emangalisayo, ukuba kuyenzeka ukuba ukuze umntu ohlobene ngokwegazi kwiqela apha 🙂
Siye kwakhona wadala a nice widget Gallery page, hamba nje ubone!
Added uncedo abathile abangaphakathi Admin lojongano imibuzo eqhelekileyo kakhulu (keys – hayi, wena uzakufuna izitshixo ngokungagqibekanga)
Vumela jQueryUI version ukuba ngaphezulu, ekusombululeni kwingxabano ezininzi (themes ubudala, lonke uhlobo izakhi kunye neenguqulelo engalungiswanga of jQuery and jQueryUI)
A sisombululo xa ezinye iplagi embi Ukufaka .css ngendlela engeyiyo (oku lukhubazekile ukukwazi ukubona zeziphi iilwimi selecred)
Ifakiwe umsebenzi transposh_echo – ukubona site yethu yophuhliso wexwebhu kunye nokusetyenziswa
Ukulungiswa widgets, Ukufakwa lula nge shortcodes, lwebhokisi endala fixes, ubunikazi isusiwe
Ukongeza touch umthwalo ukuba admin, ukuvumela ukhetho ulwimi kwizixhobo touch
Ukulungiswa imiba minor yafunyanwa ukususela 0.9.0
Ingaba ulunde ntoni? umxokozelo inguqulo entsha ngoku!
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele ephawulweyo Nge: engephi, khulula
inguqulelo 0.8.5 – Siyayixhasa Lao kakhulu
EyoMsintsi 17, 2012 ngokuthi umnikelo Shiya Comment
A isele sikwamkela mouse iLaos
kakuhle, Google nje kubhengezwa zabo ukuguqulela blog ukuba ziya kuxhasa Lao, ulwimi olusemthethweni iLaos, ngoko songeze ikhowudi efunekayo yaye wenza ukhupho ngokukhawuleza inkxaso kule ulwimi, leyo kananjalo kuxhaswa Enye Hour Translation.
Uguqulelo sele phandle iintsuku ezimbalwa kodwa ingxaki kukufumana olu ephilileyo yeposi ukufumana umfanekiso. Thina uqinisekile ukuba umfanekiso afanelekileyo, kodwa ubuncinane oko izicengcelezo.
Lonwabele olu guqulelo lutsha.
ifayilishwe Phantsi: Imiyalezo Jikelele, izaziso Release ephawulweyo Nge: uphando loshintsho magama, engephi, kweelwimi ezininzi, khulula
Okulandelayo Page »